I-Paisa Kamane Wala App: Zuza ngokuhlala kwi-Intanethi kwindawo yakho yokuthuthuzela | XperimentalHamid
Usetyenziso lwePaisa Kamane Wala: Zuza ngokuhlala kwi-Intanethi kwindawo yakho yokuthuthuzela
January 23, 2021 by UKainat Maqsood
Ezi ntsuku sonke sikhangela iiapps ezinokusinceda ukuba sifumane imali kwi-intanethi ngokuhlala ekhaya. Kwasekwa iApp efanayo neyaziwa ngokuba yiPaisa Kamane Wala App.
Kule bhlog, ndiza kukuxelela ngezinye iiapps ezinokusinceda ukuba sifumane imali kwi-intanethi. Kwaye siya kukwazisa ngePaisa Kamane Wala App.
Abantu bayasokola ukufumana iinkqubo ze-intanethi okanye imisebenzi yamantombazana akhethekileyo angavunyelwanga ukuba aphume ezindlini ngeenjongo zomsebenzi, kodwa le app iyakusinceda ukuba soyise uloyiko lokuhlala ungasebenzi ekhaya.
Lolu hlelo lokusebenza luya kunceda abantu abaninzi kwiinkalo ezininzi. Abanye abantu banokufumana imali ngelixa befunda oko kuya kukunceda ugcwalise iimfuno zakho zemali. Akukho nto inokukhathazeka ngayo.
Kukho iziza ezahlukeneyo ezinokubonelela ngemisebenzi ekwi-Intanethi ukuze ufumane umvuzo kwi-Intanethi. Ukufumana i-Intanethi akukho lula kangako njengoko sicinga, kufuna ukungaguquguquki kunye nokusebenza nzima ukufumana amanqaku akho.
Iinkcukacha ezithe kratya malunga nePaisa Kamane Wala App inikwe apha ngezantsi.
I-Paisa Kamane Wala App 2021
Eyona misebenzi ilungileyo yePaisa Kamane Wala
Zeziphi ezona zintle zePaisa Kamane Wala
Kweli xesha lobugcisa siba ngamavila kakhulu kuba umthwalo wethu womsebenzi uthathwa phantse ngabo bonke oomatshini.
Kuyafana nakwindlela yethu yokuba kule mihla abantu bafumana i-intanethi ngokuhlala ekhaya kwindawo yabo yokuthuthuzela.
Eyona nto ibangela ukuba ulutsha lwethu lube luLil olonqenayo nolungasebenziyo. Kukho amashumi amawaka eeapps ezinokusinceda ukuba sifumane imali ngokuhlala kwindawo yethu yokuthuthuzela.
Abantu bakhangela kwi-Intanethi i-Paisa Kamne Wala App kwezi ntsuku kuba ngenxa yesi sifo abantu bahlala ekhaya ixesha elide kwaye banamathele kwiifowuni eziphathwayo nakwiikhompyuter ngakumbi.
Uninzi lwabantu lubuza malunga neziapps ukuba umntu angafumana malini ngale nsiza? Ewe, umbuzo omhle.
Uyakufumana imali ethe kratya ngokusebenzisa eziapps, kokukhona usebenza apha ngokungakhathali, kokukhona uya kufumana, kodwa kuxhomekeke kwixesha olichitha kwinkqubo yokufumana.
Ukuba uchitha iiyure ezili-12 ngosuku uyakuhlawulwa ngokufanelekileyo. Kwanale uya kufumana amanqaku, iindaba phaya, ukuba uza kuzifunda ngakumbi kangangoko unokuba ufumana umvuzo omkhulu ophupha ngawo.
Ngale mihla umntu ngamnye uneefowuni ezandleni zakhe. Ukuba siyisebenzisela injongo elungileyo njengokufumana imali ngokoqobo akukho mntu uya kubizwa angasebenzi.
Apha ndiza kukwazisa malunga nezinye iiNkqubo ezingasinceda ekufumaneni imali kwi-intanethi. Iinkcukacha zeappisa eziphambili zepaisa kamane wala zinikwe apha ngezantsi.
Le app apho sinokufumana khona imali. Esi sicelo kufuneka sabelane nabahlobo bakho ukuze bafumane imali, Kodwa nantsi eyona nto inomdla kule nkqubo yokufumana umvuzo kukuba unokufumana ukuya kwi-25 lacs ngokusebenzisa le app. Akumangalisi?
Ukulanda: 10,000,000 +
Ubungakanani besicelo: 23 MB
2- Yenza iMali-App yasimahla yeMali
Ukukhuphela oku okokuqala uza kufumana iirandi ezingama-50. Kwaye emva kokwabelana nabahlobo bakho uya kufumana ngokwabelana ngama-5.
Ukulanda: 5,000,000 +
Ubungakanani besicelo: 6.8 MB
I-Intanethi ibhuqwe yipaisa kamne waleapps kodwa ezinye zezona zilungileyo ziya kukhankanywa apha ngezantsi.
Kuya kufuneka uzikhuphelele, uzisebenzise kwaye wabelane ngazo ngokungaphezulu ngokuhlala ekhaya kwindawo yakho yokuthuthuzela.
4- INTLAWULO YOGOGO (TEZ)
6- Imivuzo ye-Google Opinion
Uya kufumana ngakumbi ii -apps zokufumana imali kwi-intanethi. Kuya kufuneka uhlale ukhuthele kwaye uzingise ukuze ufumane impumelelo.
Thatha ujongo Umdlali: Groovy App uyikhuphele
Kule mihla, abantu bajolise kwizifundo kunye nokufumana imali kwi-intanethi. Itekhnoloji ikhule kakhulu kangangokuba umntu ngamnye unokufumana ithuba lokufumana imali kwi-intanethi.
Ngokwenza oko kufuneka sihlale singaguquguquki kwaye sizingise ekusebenzeni nzima. I-Paisa kamane wale apps zikhona kwi-intanethi kunye nezinye zezona zixhobo ezilungileyo kakhulu ezabelwana ngam ngasentla.
iindidi Mobile Apps, Tech tags Eyona misebenzi ilungileyo yePaisa Kamane Wala, I-Paisa Kamane Wala App, I-Paisa Kamane Wala App 2021, Zeziphi ezona zintle zePaisa Kamane Wala Post yokukhangela
In TikLoading ... Lungelo TshabalalaPublic
Isahluko se-1806 Ukutshata kwiNoveli yoSapho lwasimahla kwi-Intanethi